Tan က Weiwei
Chen က Weiqi
အက်ဒီဆင် Chen က
Jin က Meixin
Randy သို့မဟုတ် ton
Chen က Xu
Megan Fox က
Huang က Guanzhong
Zhang က Xin ရီ
Zhang က Linyi
Zhao နှင့် Yun
Zhao နှင့် Zilong
Zhang က Fei
ငှက် Anderson က
ကိုး tailed Fox
Little က Fox က
နည်းနည်း mouse ကို
Little က hippocampus
Erlang Shen ယန်
Qitian Dasheng Sun က Wukong
နှလုံး Lock ကို
အသေးစား vanilla ပန်းပွင့်
Big V ကို
တူညီသော Plaza တွင်တက်တူးထိုးခန်းရှိသောကြောင့်လူအချို့သည်စတိုးဆိုင်သို့မသွားနိုင်ကြပါ။?
၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀ က ၂၀၁၃၃၀ တွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်.ယခုမူကား,တက်တူးတွေဟာခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာတယ်.တက်တူးထိုးထားသောနေရာများသည်သင်၏အဆင့်မြင့်ကုန်တိုက်များတွင်ပေ......
သင်တစ် ဦး တက်တူးထိုး selfie သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံ post?
ငါတက်တူးထိုးပြီးပြီ,ပြီးတော့မိုးရွာဖို့ပုံစံပြုထားတဲ့ Kanji တစ်ခုပါ,အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများကြီးကိုယ်စားပြုတယ်၊ ကျွန်တော့်နာမည်ပြောင်က Raen (မိုးရေလိုအသံထွက်),ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကမိုးရွာရွာလမ်းလျှောက်ရတာနဲ့ကစားတာကိုနှစ်သက်တယ်,ငါကအများဆု......
Taehyung ၏တက်တူးထိုးခြင်းသည် MV တွင် 'On' အမြဲဖြစ်ပါသလား။
ဒါက James Corden နဲ့အတူ carpool karaoke မှာပါ။ သူကသူ့မျက်နှာမှာတက......
တက်တူးထိုးတဲ့အနုပညာရှင်ကငါ့ကိုဘာကြောင့်မျက်နှာတက်တူးထိုးချင်တာလဲ?သူကကျွန်တော့်ဘ ၀ မှာအရာရာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့မျက်နှာတက်တူးတွေနဲ့အထူးသတိထားဖို့ပြောခဲ့တယ်.သူတကယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
ယေဘူယျအားဖြင့်တက်တူးများသည်ယခုတွင် ပို၍ လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်သည်,သူတို့ကအတိတ်၌ရှိကြ၏ထက်,သို့သော်မျက်နှာတွင်တက်တူးထိုးခြင်းသည်စီးပွားရေးလောကတွင်တူညီသောလက်ခံမှုမဟုတ်ပါ.သင်မျက်နှာပေါ်တွင်တင်ချင်သောအနုပညာလက်ရာများသည်သင်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်မ......
နောက်ဆုံးတက်တူးကိုတွေ့တော့ငါလိုချင်တာက ၃ စင်တီမီတာစတုရန်းလောက်ပဲရှိမယ်။ ဒါပေမယ့်အနုပညာရှင်ကငြင်းခဲ့တယ်.
သူကဒီအရွယ်အစားမှာကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ဟုသူကပြောသည်.ငါ့နံရိုးနံရိုး / ဘေးပတ် ၀ န်းကျင်တွင်၎င်းကိုယူနေစဉ်အရွယ်အစားသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသေ......
စစ်တပ် \_u003d ငါတို့
အလယ်မျဉ်းမပါဘဲ A သည်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်အောက်ခြေ V နှင့်တူသည်?(တောင......
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်သည်တက်တူးထိုးရန်တရားဝင်အသက်ဖြစ်လျှင်,သူတို့မျက်နှာပေါ်ကလူတစ်ယောက်ကိုတောင်းတဲ့အခါတက်တူးအနုပညာရှင်တချို့ဘာကြောင့်သူတို့ကိုငြင်းပယ်တာလဲ?
ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းမှာ ၁၈ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ သူတို့ကစည်းဝေးပွဲလိုင်းလိုကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံးမှာစမတ်ကိရိယာတွေတပ်ဆင်နေတုန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖွဲ့သားတွေနဲ့လေ့ကျင့်မှုလုပ်တယ်။.ဘယ်ဘက်လက်မှာငါ့လက်ကိုငါ့ရဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ယူရမလဲလို့သူမေးတယ်.< li>
အခြေအနေအရပဲ.တစ် ဦး ကတက်တူးထိုးတစ် ဦး လျှာကိုလက်စွပ်ရတဲ့ထက်ပိုမိုနာကျင်,ငါ့အတှေ့အကွုံအတွက်.ဒါပေမယ့်ငါ့နို့သီးခေါငျးကိုထိုးဖောက်တာကဆေးမင်ကြောင်ထိုးရန်နည်းလမ်း WAY ထက်ပိုတယ်။ ,သူတို့သည်အမြဲတမ်းခက်ခဲနေပြီးထိုးဖောက်ခံရပြီးနောက်ပင်သင့်ရှပ်အင်္ကျီကိုဆန့်ကျင......
Tramp Stamp ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို Google ကပဲရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ်,မမ?
၎င်းသည်အမျိုးသမီးများ၏ (ယေဘုယျအားဖြင့်) နောက်ကျောတွင်တက်တူးထိုးထားသည်,အထက်ထွင်ထားခြင်းပေါ်မှာ.< li>
Kim Taehyung ၏တက်တူးထိုးသည်မှန်ပါသလား။
သူတို့မှာရှိတဲ့တက်တူးတွေကိုလူတိုင်းမကျေနပ်ကြဘူး.ငါသတ္တုတွင်းတစ်ခုခုကိုနောင်တမရပါဘူး.သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အပိုင်းအစတစ်ခုစီကိုသေချာစွာစဉ်းစားရန်အချိန်ယူခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏အနုပညာရှင်များအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိပြီးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်.